ဆီပူေလာင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါက အမာရြတ္ေတာင္မက်န္ေစတဲ့ သဘာဝနည္း – စွယ်စုံသုတ
နည်းလမ်းကရိုးရွင်းလွန်းလို႔ ေၾလႇာ့မတွက်နဲ႔ေနာ်။ ၾကႇန်ေတာ့်သူငယ်ချင်း ပြန်လည်ျမႇဝေပေးခဲ့တဲ့နည်းေလးပါ။ သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြဳခဲ့တဲ့ လက်ေတွ႕နည်းပါလို႔ေပြာပါရေစ။
ရကွေညျဖောငျးမထ အမာရှတျကနြျခဲ့မှာစိုးရိမျစရာမလိုသညျ့အတှကျဒီနညျးလမျးကို ယုံကွညျစှာနဲ့အသုံးပွုလိုကျပါလို့ အကွံပွုပါရစေ…. ။ မေတ္တာဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါနော်မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။
နညြးလမြးကရိုးရှငြးလှနြးလို့ လွှော့မတှကနြဲ့နောြ။ ကွှနတြော့သြူငယခြငြွး ပှနလြညမြွှဝပေေးခဲ့တဲ့နညြးလေးပါ။ သူကိုယတြိုငအြသုံးပှုခဲ့တဲ့ လကတြှေ့နညြးပါလို့ပှောပါရစေ။
ရကှညေဖြောငြးမထ အမာရှတကြနွခြဲ့မှာစိုးရိမစြရာမလိုသညြ့အတှက ဒြီနညြးလမြးကို ယုံကှညစြှာနဲ့အသုံးပှုလိုကပြါလို့ အကှံပှုပါရစေ…. ။ မတေ်တာဖွငျ့ပွနျလညျမြှဝပေေးပါနောျမူရငျးရေးသားသူ နှငျ့ ဓာတျပုံပိုငျရှငျမြားအား လေးစားစှာဖွငျ့ Credit ပေးပါသညျ။